တောလာရောက်လည်ပတ်ကြ - ယနေ့ခေတ်အထင်ရှားဆုံးမြို့ကြီးများ၏ဒူဘိုင်းတဦးတည်း
14 အကောင်းဆုံးအသေးစားစကေးစီးပွားရေးအကြံပြုချက်များဒူဘိုင်းအတွက်သင်၏လုပ်ငန်းထ Set မှ
မေလ 11, 2019
ဒူဘိုင်း - ယနေ့ခေတ်တွင်အထင်ရှားဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအကြားပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ် ခေတ်သစ်အနာဂတ်နှင့်ဆန်းသစ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူ ဦး ရေ။ မတူကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုများစွာကိုတစ်ခု၌တွေ့မြင်ခြင်းသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည် နေရာ နှင့် အာရဗီယဉ်ကျေးမှုကိုသိရန်ရ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ။ ရှာဖွေစူးစမ်းနှင့်ပျော်စရာအဘို့မွို့၌ဤမျှလောက်များစွာသောအရပ်တို့ကိုရှိပါသည်။
သငျသညျဒူဘိုင်းရောက်ရှိလာသောအခါသင်တို့ကိုတွေ့မြင်ပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်။ ကမ်ဘာပျေါမှာအကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေလေဆိပ်တစ်ခုမှာ။ ငါသည်သင်တို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်တစ်ခုမှာအစွန်အဖျားမရောက်မီ Marhaba ဝန်ဆောင်မှုစာအုပ်ဆိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအလုပ်ရှုပ်လေဆိပ်မှာအလွန်အသုံးဝင်သောနှင့်တန်ဖိုးရှိသောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသင်အချိန်ကုန်သက်သာခြင်းနှင့်သင်ကရောက်ရှိလာသည့်အခါရှိစေခြင်းငှါရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်။
An လေဆိပ် ထောက်ပံ့သူ သင့်ရဲ့ဆိုက်ရောက်ပေါ်မှာတံခါးဝမှာသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းအပေါင်းတို့နှင့်လေဆိပ်အခမ်းအနားမဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ရုံအေးဂျင့်ရန်သင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေးရနျလိုအပျနှငျ့သငျစောငျ့ရှောကျနှင့်လေဆိပ် "sightsee" ဖို့အချိန်ရှိသည်နေချိန်မှာသူသို့မဟုတ်သူမ, ကြွင်းသောအရာဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအကွာအဝေးကတည်းကအတော်လေးကြီးမားတဲ့ရှိပါတယ်, သငျသညျအကောက်ခွန်နှင့်အိတ်ကိုပြောဆိုချက်ကိုဧရိယာရန်သင့်အားကြာမြင့်သောကျော်ကြားသောဓာတ်လှေကားမှရောက်မှုအပေါ်တံခါးဝမှသင်တို့ကိုလွှဲပြောင်းမည်သည့်တစ်ဦးယုန်ကလေးကားနှင့်အတူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဤသည်ဓာတ်လှေကားဒါဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ wow ခံစားချက်အရွက်ကြောင်းအံ့သြဖွယ်, စဉ်တွင် ခရီးသွားလာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက 60 လူတွေကိုခေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်ကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးသွားနေတုန်းစောင့်ကြည့်ဖို့လှပတဲ့ရေတံခွန်လည်းရှိတယ်။
သင်ပထမဦးဆုံးကြောင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စစ်ဆေးမှုများပြီးနောက်ထို့နောက်မျက်စိစကင်ကိုမဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများအားဖြင့်, အကောက်ခွန်ပေါ်တွင်တန်းစီ, ရှည်လျားသည်။ သငျသညျကိုဦးစားရှိသည်ကြောင့် Marhaba န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ, သင်သည်လူတန်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ် အထူးသတ်မှတ်ထားသောကဏ္ဍအပေါ်နှင့်အခြားသူများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာရှောက်သွား။ ထို့အပြင်အိတ်ကိုပြောဆိုချက်ကိုဧရိယာပေါ်, သင်၏ခရီးဆောင်အိတ်များကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းနဲ့အေးဂျင့်ရှိလိမ့်မည်ထွက်ပေါက်မှသင်တို့အဘို့ကလွှဲပြောင်းနှင့်ပင်သင်တို့အဘို့ယာဉ်ထဲမှာ ထား. , သင်ပင်နှောင့်ရှက်ခြင်းမရှိဘဲ။ ဒီဝန်ဆောင်မှုဆိုက်ရောက်အပေါ်ထုတ်ပေးရန်ဗီဇာပါဝင်သည် သငျသညျပြန်လမ်းပေါ်တွင်ထွက်ခွာမတိုင်မီငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်သောနေရာအဖြစ်ကောင်းစွာနှင့်အထူး Lounge ။ ဒါကြောင့်အကောင်းတစ်ဦးအစွန်အဖျားဖြစ်ပြီး ဒူဘိုင်းလာရောက်လည်ပတ်သည့်အခါစိတ်တွင်ရှိသည် ဒါဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဖြစ်၏အထူးသဖြင့်အခါ။
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒေသများ၏တဦးတည်းဒူဘိုင်းရှိ Marina ဖြစ်ပါသည်။ ဧရိယာလှပသောဟိုတယ် Burj Al Arab ၏လှပသောမြင်ကွင်းကိုနှင့်အတူကောင်းတဲ့စားသောက်ဆိုင်နှင့်အရက်ဆိုင်ပြည့်ဝ၏။ သငျသညျပုံမှန်ကြိုးစားနေအာရဗီထူးခြားဆန်းပြားပတ်ဝန်းကျင်ခံစားရနိုင်ပါတယ် အဘိဓါန် Arabic မုန့်ညက်ကွဲပြားခြားနားသောအရသာနှင့်အတူဒေသခံဆေးလိပ်သောက် device ကို -a ရှူရှိခြင်းနေစဉ်။
တစ်ဦးကပထမဦးဆုံးပျော်ရွှင်စရာလှုပ်ရှားမှု သငျသညျလွဲချော်တောလာရောက်လည်ပတ်မနေသင့်။ သင်သဲကန္တာရမှဖူးကြပြီမဟုတ်လျှင်သင်ဒူဘိုင်းမှဖူးကြပြီမဟုတ်။
အဆိုပါ သဲကန္တာရ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း လှုပ်ရှားမှုများလည်းပါဝင်သည်။ သဲများရှိသည့်ကားကြီးနှင့်အတူ Dune Bashing ။ ကုလားအုတ်စီး။ ညစာစားသည်။ အထူးကော်ဇောများပေါ်တွင်သဲပေါ်တွင်ထိုင်နေသည် ပုံမှန်အာရပ်ဝမ်းစောင့်ကြည့်နေချိန်မှာသင်သာဒူဘိုင်းထဲမှာမွငျနိုငျဘယ်မှာ -an မယုံနိုင်စရာရှိုးခြင်းသည်ကခုန်။ အန္တရာယ်အရှိဆုံးနဲ့လှပတဲ့ခုန်တစ်ခုမှာအရှေ့တိုင်းဂီတ၏စည်းချက်အောက်မှာသူမရဲ့လက်၌ဓားနှင့်အတူတစ်ဦးကခုန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ကစားခြင်းနှင့်ကခုန်နိုင်အောင်ချောချောမွေ့မွေ့နေတဲ့ကစားစရာများကဲ့သို့, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပြင်းထန်သောခံစားချက်အတွက်လေ့လာသူစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးအချိန်ကာလယန္တရား၌တည်ရှိ၏နဲ့တူခံစားသူတို့ကိုစွန့်ခွာနေသည် သူတို့အားမှော်အာရပ်ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
သူမသည်ကစားခြင်းနှင့်ကခုန်နိုင်အောင်ချောချောမွေ့မွေ့နေတဲ့ကစားစရာများကဲ့သို့, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်ပါတယ် ပြင်းထန်သောခံစားချက်အတွက်လေ့လာသူစောင့်ရှောက်ခြင်း အဲဒီမှော်အာရပ်ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်သို့လွှဲပြောင်းတဲ့အချိန်စက်၌တည်ရှိ၏နဲ့တူခံစားသူတို့ကိုစွန့်ခွာ။
အခြားလှုပ်ရှားမှုပုံမှန်အားလက်နှင့်လက်ကောက်အပေါ်လုပ်ဟင်္နာတော Paintings- လှပသောပန်းချီကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတက်တူးထိုးနဲ့တူပေမယ့်တစ်ဦးအညိုရောင်အရောင်နှင့်အတူကြည့်ရှုအကြောင်းတစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုအဘို့ကြာရှည်ခံသောကြောင့်သင်ကပြုမူဆက်ဆံနှင့်မည်သို့မကြာခဏရေနှင့်ထိတွေ့ဘယ်လိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အဆင်တန်ဆာများကဲ့သို့ကဝတ်ဆင် သူတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးမတ်မတ်မှဆက်ပြောသည်။
တော၌များစွာသောစျေးဆိုင်များနှင့်စျေးရှိပါတယ်ဘယ်နေရာမှာသင်အမှတ်တရပစ္စည်းများနှင့်သိပ်ပြီးမက dancing- ပုံမှန်အရှေ့တိုင်းစတိုင်စဉ်ကြောင့်ဆူညံသံဖန်တီးပေးသောကြောင့်အပေါ်နည်းနည်းရွှေအရောင်ရပေမဲ့နည်းပါးတဲ့နှင့်အတူဒီဇိုင်းကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုတစ်ဦးနှစ်ဦးကိုအပိုင်းပိုင်းမတ်မတ်, ယ့် wear- သောမတ်မတ်မဝယ်နိုင်ပါ။ သင်၏ဗီရိုထဲမှာမှတ်ဉာဏ်အဖြစ်ဆက်နေလိမ့်မည်။ ကန္တာရ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်းတစ်ဦးမမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံ အရာဒူဘိုင်းလာရောက်လည်ပတ်ရ-do အခါသင်ဟာအလွယ်တကူဒေသခံကုမ္ပဏီများကသဲကန္တာရ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်းဒူဘိုင်းတစ်ဦးနှင့်အတူဤစွန့်စားမှုစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် http://www.desertsafaridubai.com/ သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကမ်းလှမ်းမှုနှင့် packages များ၏ကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းစပ်ရနိုင်ရှိရာ။
ကမ္ဘာကြီးကို Burj Khalifa အတွက်အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦး
မဖြစ်မနေအပန်းဖြေဘို့ Next ကိုရာအရပျသင်တန်း၏, သည်, အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦးဟာကမ္ဘာ့ Burj Khalifa ။ အဲဒါကိုဘေးကစမ်းရေတွင်း၌ကွဲပြားခြားနားသောဂီတစတိုင်များနှင့်အလင်းသက်ရောက်မှု၏အသံအောက်တွင်လှပသောကခုန်ရေဖြစ်ပါတယ်။ အများအပြားစားသောက်ဆိုင်, စျေးဆိုင်များနှင့်ဘားရှိပါတယ် သငျသညျစူးစမ်းလေ့လာနိုင်သောနေရာကဒီဧရိယာထဲမှာ။
Shopping Mall, များစွာသောရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လူကြိုက်အများဆုံးကတော့ဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်း Mall က နှင့်၏ Mall စော်ဘွား. အမ်းမရိတ်၏ Mall ထဲမှာသင်အပြင်ဘက်ပူသောရာသီဥတုမှအကုန်တိုက်ထဲမှာနှင်းလျှောစီးတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိစကီးဧရိယာမြင်ရလိမ့်မည်။
စျေးဝယ်လည်းနည်းနည်းပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ အားလုံးစတိုးဆိုင်များနှင့်ကြီးမားသောမောလ်များအပြင်အခြားက hidden ဒေသများရှိရာရှိပါတယ် သင်တဦးတည်းနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့် untypical လမ်းအတွက်စျေးဝယ်လုပျနိုငျ။ ကောင်းပြီ, ငါတို့ရှိသမျှသည်မိန်းကလေးများအတုအမှတ်တံဆိပ်အိတ်ဝယ်ဖို့ဝှက်ထားသောစျေးဆိုင်သွားကြသည်ရှိရာဒုတိယရုပ်ရှင်လိင်နှင့်မြို့အတွင်းရှိမြင်ကွင်းတစ်ခု, ငါသိ၏။ ဒါကညာဘက်င် - ငါဝှက်ထားစတိုးဆိုင်များအကြောင်းပြောနေတာငါ။ ဤရွေ့ကားသူတို့တစ်တွေလူနေမှုများအတွက်အဆောက်အဦများတွင်တည်ရှိပြီးကြောင့်သင်အမှန်တကယ်မမြင်ရနိုင်သည့်နေရာများဖြစ်ကြသည်။
သင်က hidden store မှာကြည့်ပါရန်သင့်အား ဖိတ်ခေါ်. သူလမ်းပေါ်မှာရောင်းသူတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်လြှငျ, မကြောက်နှင့်မြင်အတှေ့အကွုံမှမသွားဘူး စျေးဝယ်၏ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ နှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့သတိရ !. သင်အမှန်တကယ်ကောင်းသောစက်မဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဖို့ရှိသည်ဒါမှမဟုတ်ရင်, barging တူသောရောင်းသူ သငျသညျပိုက်ဆံတစ်ရယ်စရာငွေပမာဏဖြုန်းတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ အတုအမှတ်တံဆိပ်ပေါ်မှာ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်မည်သို့မည်ပုံအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုသိ, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်တောက်ပဒူဘိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ပင်တိုင်းပြည်၏ငယ်ရွယ်စဉ်ကဒီတိုင်းပြည်များလွန်းတဲ့သမိုင်းရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းကို ယူ. ဒူဘိုင်း၏ဟောငျးမြို့စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ go to သင်တစ်ဦးလှေ ယူ. သာ 1 သို့မဟုတ်2dirhams များအတွက်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးရန်ရှိသည်။ ဒါကတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အတွေ့အကြုံ ဤအစက်လှေသငျသညျရေ၌မဆိုယခုအချိန်တွင်လဲအကြောင်းကိုများမှာကဲ့သို့အကအတွက်ခရီးသွားလာ၏ခံစားချက်ကယ့်နိုင်အောင်သေးငယ်တိုတောင်းကြောင့်။
အဆိုပါစက်လှေ4သို့မဟုတ် 5people အထိကြာနှင့်များသောအားဖြင့်နိုင်ပါတယ် လှေက navigate တဲ့သူလူတစ်ဦးလည်းမရှိ။ သင်ကတခြားအခြမ်းကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာသင်တစ်ဦးလုံးဝရွှေ့ဆိုင်းမှော်ကမ္ဘာကိုဝင် - ဒူဘိုင်း၏အဟောင်း Souk။ အသေးစားလမ်းများစျေးအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ သငျသညျအစဉျအမွဲသင်၏အသက်တာတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်နံ့သာအကြီးမားဆုံးမတူကွဲပြားမှုများနှင့်များစွာသော။ Big အိတ်ထိုသူအချို့တို့သည်ပင်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားဒါကြောင့်ရောင်စုံနံ့သာမျိုးကိုအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ ထိုအသင်သည်ထိုသူတို့ထံမှခံစားရနိုင်ပါတယ်လေထုထဲတွင်အနံ့နှင့်အနံ့ဒါချိုမြိန်ခြင်းနှင့်ဆုံးသောဖြစ်ပါသည် အစဉ်အမြဲသငျ့စိတျထဲမှာဖမ်းမိပါလိမ့်မည်သည့်။ ဤ "အလီ Baba နှင့် 40 သူခိုးတွေ" ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်မှကြာသည့်အခြားနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဒူဘိုင်းစီးတီး - နိဂုံး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်စားမှုအဆုံးသတ်နေရာအရပ်ဖြစ်၏, ဒါပေမဲ့ဒီမြို့ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားနေရာများတွင်ပုန်းအောင်းနေသည် ပိုအံ့သြစရာများနှင့်စူးစမ်းလေ့လာမှဖြစ်ရပ်များဖြစ်ကြသည်။ ဒူဘိုင်းအရှိဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဦးဖြစ်ပြီး, သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်သောကမ်ဘာပျေါတှငျတက်ကြွမြို့ကြီးများ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ယခုထောက်ပံ့ပေး ဒူဘိုင်းဘဝအတှကျကောငျးလမ်းညွှန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒီတော့ဒါကိုစိတ်ထဲထားပြီး၊ သင်ယခုရနိုင်သည် လမ်းပြ, အတွက်အကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။